2019-08-26 @ 16:46 in Toekarena
Efa tsy dia tia manara-baovao loatra fa toa resaka fifanilihana sy fifampiangana ankolaka no mameno izany. Izay no tsy dia nampazoto nanoratra loatra. Saingy tsy maintsy mangidihidy ny tanana rehefa misy ny toe-javatra tahaka izao.
Vao tamin'ny herinandro aho tao SabNam no mbola nahita menaka (amin'ny bidon mavo) eny amin'ny mpamongady, fa tsy nahita intsony aho androany maraina raha saika hividy. Toerana iray no hany nisy tao fa amin'ny vidiny nitombo 19,5% ka hatramin'ny 22% noho ny amin'ny vidiny nahazatra izany (arakaraka ny mpamongady mahazatra anao).
Vao haingana dia haingana no nisy fitarainana an-gazety amin'ny fandotoana ataon'ny orinasa mpanodina menaka iray ao Toamasina ao, saingy orinasa hafa vao nijoro tamin'ity taona ity indray no nahazo didy hitsivolana hakatona... satria, hono, Ravalomanana ihany no olona ao ambadik'ity orinasa vaovao ity. Tsy haiko izay fahamarinany fa mihevitra izany ho fisintonana lakolosy aho satria orinasa an'ny milaza tena ho Malagasy saingy tsy mbola eken'ny maro ho Malagasy noho ny tsy fanekeny hifanambady ara-dalàna amin'ny Malagasy hafa no lazaina ho tompon'ilay orinasa nanaovana fitarainana.
Dia misy izany ny manararaotra ny toe-javatra, satria ilay orinasa nanaovana fitarainana no manana ny ampahany be amin'ilay tsenan'ny menaka amin'ny bidon mavo raha aty amin'ny faritra misy anay. Mety ho avy ihany koa ny tsahotsaho izay tsy marina fanaon'ny te-hanatsafa fa mety nandoa vola tany amin'ny tompon'andraikitra ambony tany hanakatonana ny orinasan'ilay gasy kely ny tompon'ilay orinasa iray dia mamerim-bola izy ka alentika kely aloha ny menaka hitomboan'ny vidiny, fa tombatombana any amin'ny tsy izy izany.
Ny hany marina aloha dia tsy misy ny menaka, mipenimpenina daholo ireo mpividy amin'ny atsinjarany fa tsy mahazaka vidin'ny iray tavoahangy. Taorian'ny krizin'ny arina izany dia menaka indray no bizina ahazoana vola haingana eto amin'ny tanàna.
2019-07-18 @ 09:00 in Spaoro
Nanana ny lazany teto amin'ny firenena izany teny hoe "Alefa Barea" izany. Anaram-pikambanana nanohana mavitrika ny ekipam-pirenena malagasy, saingy lasa teny tarigetra nampihorohoro sy nahasanganehana ireo firenen-kafa nifanehatra taminy tao amin'ny CAN (TotalAfCon 2019) notontosaina tany Ejipta. Sambany tokoa i Madagasikara no mba tafiditra dingana famaranana tamin'izany lalao CAN izany.
Nanana ny akony lehibe tamin'ny vahoaka malagasy ny nahatafakatra ny ekipam-pirenena hatramin'ny ampahaefa-dalana. Horakoraka tany amin'ny faritra vitsivitsy an-tanandehibe raha nandresy tamin'ny lalao faharoa, mbola vao ny ila-tongotra ihany anefa no tafiditra any amin'ny ampahavalon-dalana tamin'io fotoana io. Niitatra faritra maro kokoa izany teo am-piravana lalao fahatelo sady nandresena ny ekipam-pirenena nizeriana (tabataba nanerana an'Antananarivo, nankarenin-tsofina ny kapokapoka sarom-bilany). Somary nangingina ihany anefa taty aminay ambanivohitra, tsy sahy nihorakoraka samirery sao dia lazain'ny olona ho miantso vonjeo eo. Mino anefa aho fa nisy nifaly naningatsingana ihany tany ho any. Tsy nety nahita tory noho ny hafaliana ka ny tao amin'ny tambajotran-tserasera no nanamparana ny horakoraka sy ny fanalana azy.
Horakoraka nanerana ny firenena amin'izay tamin'ny fandresena ampahavalon-dalana nifanatrehana tamin'ny RDC. Nivoaka ny trano avokoa ny olona rehetra. Nahamora izany koa ny fametrahana karazana "fan zone" tany amin'ny faritra maro, nisy ihany koa ireo nanomana araka ny herin'ny tenany, toy ny teto Isahafa misy anay, izany karazana "fan zone" izany, tsy nakana vola fa maimaimpoana na dia tsy miankina aza. Maro tamin'ireo nanana fiara no nandeha nitety ny faritra manodidina. Nanao toy izany ihany koa izahay, saiky hiakatra hatrany SabNam, tanàna lehibe indrindra eto amin'ny manodidina anay, saingy nihitsoka tanteraka ny fifamoivoizana raha vao tafakatra an'Antsofinondry fotsiny izahay. Faly avokoa ny olona rehetra, na ny fetim-pirenena vao nankalazaina tsy ampy iray volana akory aza izay tsy mbola nahavoriana olona nihorakoraka tahaka izao indrindra fa taty ambanivohitra. Saika nampiato ny asany avokoa ny mpanendaka sy ny mpamaky trano, tsy maintsy nisy ihany anefa ny namalan-kira. Semban-drahona ihany izany hafaliana izany satria maromaro ny olona maty noho ny fitsahatry ny fony, nalaza ihany koa fa nisy maty noho ny fahatapahan'ny lalan-dra noho ny faharesena tany RDC tany.
Tonitony eo ho eo ihany tamin'ny ampahaefa-dalana satria resin'i Tonizia tamin'io fotoana io. Raha nampiresaka olona maromaro aho talohan'ny lalao dia betsaka ireo olona efa nionona sahady fa efa zava-dehibe ny vitan'ny ekipam-pirenena, ary marina izany. Na izaho aza somary niteny sompirana tamin'ny teo akaikiko ihany raha nisy fiara nanao fanentanana hiaraka hijery baolina tao Anosimiarinimerina tao fa "tsy maintsy mandresy" isika. Sao dia mahafaty olona amin'izany isika, hoy aho tamin'izany, lalao io ka tsy mbola fantatra izay handresy sy resy. Tsoriko kosa anefa, fijeriko manokana, fa niandry hovonoina fotsiny isika tamin'io lalao fahatelo io, rehefa lasa nandany andro nanao vodilaharana avokoa ny lohalaharana sy izay rehetra tokony hamono baolina. Mety hoe nanantena tsindrotsindrona farany toy ny lalao teo aloha angamba, moa nitaky ihany koa ny havizanana, tsy dia nisy loatra ireo afa-nifanolosolo nefa tena ilaina izany amin'ny lalao tahaka itony.
Ny fitsenana 13 jolay ny ekipa no tena fety be da fety be araka ny fomba fiteny ankehitriny. Tsy nisy hafaliana toy izany teo amin'ireo mpitsena. Nanomboka teo Ivato ka hatrany Mahamasina. Nosembanin'ny fikarakarana tsy lavorary ihany ity fitsenana ity na dia nahafinaritra aza ny lanonana ary niafara tamin'ny afomanga izany.
2019-05-21 @ 17:12 in Politika
Tsy nahatadidy aho no sady tsy miraharaha izay niandohan'ny nanomezana depiote roa isaky ny boriborintany ny ao an-drenivohitra ao. Dia variana ihany koa aho hoe nomena tombony manokana ireo renivohi-paritany ka nomena depiote roa ihany koa, na dia vitsy mponina noho ny tanàna maro hafa aza. Misy zavatra hafahafa ao ambadik'izany raha ny fijeriko manokana ary izay rahateo no ampitaiko aminareo.
Faly ery ny mponin'Antananarivo hoe mba omena ny hanitra sahaza ho azy ka manana depiote 12 be izao ao amin'ny antenimieram-pirenena. Voamarika anefa fa mifamono ny isan'ny depiote raha antoko roa no mifaninana. Vokany: hifarana amin'ny samy mahazo depiote 6 ny roa tonta afa-tsy hoe ambany noho ny atsasaky ny vato azon'ny voalohany ny faharoa. Sarotra anefa ny hahazoana izany raha ny ao an-drenivohitra no heverina.
Fehin'izany: toy ny tsy manampeo ihany Antananarivo fa izay manana ny maro an'isa amin'ny ankapobeny ihany no hitana ny maro an'isa sy tompon'ny feo. Inona ny vahaolana manoloana izany? Tsy ho an'Antananarivo ihany no vahaolana fa ho an'ny tanàna rehetra. Aleo depiote iray isaky ny fari-pifidianana iray ihany no fidiana, ka raha 12 ny depiote omena an'Antananarivo dia ataovy fari-pifidianana 12 ny eto Antananarivo. Toy izany ihany koa amin'ireo tanàna hafa rehetra ka omena depiote mihoatra ny iray, dia mivoaka araka ny tokony ho izy ny safidim-bahoaka.
Mbola misy ny hevitra hafa na fanamarihana momba ny fifidianana depiote fa izay aloha no atolotra anareo anio.
2019-05-19 @ 07:11 in Politika
Ireto no tsikaritro amin'ny Lalampanorenana ka nisy nilaza fa saika ovaina saingy notsipahin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny hanaovana referandaoma.
Andininy 151: Fidian'ny vahoaka mivantana ny Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina
Andininy 154 -155: Fidiana ny Ben'ny Faritra sy ny Filankevitra. Mpikambana ao amin'ny filankevitra avy hatrany ny depiote sy ny senateran'ny faritra.
Andininy 158 - 159: Fidiana ny Ben'ny Faritany, Fidiana toy izany ihany koa ny Filankevi-Paritany. Mpikambana ao amin'ny filankevitra avy hatrany ny depiote sy ny senateran'ny faritany.
Ireo andininy efatra farany no nokasaina ovaina araka ny tsilian-tsofina, saika hotendren'ny filoham-pirenena no nanoloana azy. Mbola miato iny fa mety hisy ny famerenana azy indray mandeha. Tsy fidian'ny vahoaka mivantana ireo olona ireo fa ny olom-boafidy hafa voafidy avy ao amin'ny andininy faha-151 (sy ny depiote sy senatera) no mifidy azy raha vakiana ny lalampanorenana.
Tsikaritra anefa fa tsy mahay mitrandraka ilay fikasana hanao referandaoma ny TIM, ny fonosin'ny fanovana dia ahafahana milaza hoe tsy mahazaka demaokrasia ny mpitondra amin'izao fotoana izao ka mila tsindrilentam-pahefana ary ny TIM irery ihany no afa-manao izany mba itoeran'ny fitondrana tsara tantana.
Tsy niditra tamin'io mihitsy ny HVM satria fantany fa tsy misy raisina izy raha notanterahina ireo andininy efatra voalaza ireo, ary matahotra ny hampihatra azy ihany koa ny MAPAR-IRD noho ny finiavana hitondra samirery ny baolina sady tsy hahay hiraza ny fahefana araka ny voatondron'ny Lalampanorenana. Mbola mila fanazavana hafa indray ve?
1 2 3 ... 152 153 154 Manaraka»